प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा के छ ? (पूर्णपाठ) - Baikalpikkhabar
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा के छ ? (पूर्णपाठ)
बैशाख २० गते,
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले कोभिडको यो लहर नयाँ स्वरुपमा थप घातक रुपमा देखा परेको उल्लेख गरेका छन् । संक्रमणको दर र मृत्युदर गतबर्षको तुलनामा बढी रहेको उनले सम्बोधनमा उल्लेख गरेका छन् ।
निषेधाज्ञालाई थप कडाई गरिएकाले प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न पहिलेझैं सबैबाट सहयोग हुने अपेक्षा सरकारले राखेको बताएका छन् । उनले जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई कडाइको साथ पालना गर्न आग्रह गर्दै कोभिड संकटसँग जुध्ने अभियानमा नेपाललाई सहयोग गर्न अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग अपिल गरेका छन् ।
सोमबार, २० बैशाख, २०७८, दिउँसोको ०४:३४ बजे